यी राशिका पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा खराब पति ! तपाई पनि पर्नुभयो कि ?::Leading Nepal News
एजेन्सी । ज्योतिषका अनुसार राशिफलको हिसाबले केही यस्ता राशि हुन्छन् जसका पुरुषलाई राम्रो पति मानिँदैन । भनिन्छ कि जुन पुरुषको राशि यी तीन राशिमध्ये कुनै एकपर्छ, ऊ विवाहपछि राम्रो पति वा श्रीमान् साबित हुँदैन । कुन् हुन् त ती राशि ?तल पढ्नुहोस्ः
मीन राशिः ज्योतिषका अनुसार मीन राशि भएका पुरुषलाई विवाहपछि त्यति राम्रो पनि मानिँदैन । मानिन्छ कि यस राशिका पुरुषले विवाहपछि आफ्नो श्रीमतीमा अनेक खालको दोष निकाल्ने गर्छन् । यो बाहेक मीन राशि भएका पुरुषलाई आफ्ना पत्नी प्रति असुरक्षा को भावना बनिरहन्छ ।वृष राशिः वृष राशिका मानिसहरुलाई धेरै नै शान्त र राम्रो स्वाभावको मानिन्छ । भनिन्छ कि जसको राशि वृष हुन्छ उ निकै नै शान्तिले आफ्नो काम गर्ने हुन्छ । तर यस राशिका पुरुष विवाहपछि आफ्नो निजी मतलब पूरा गर्छन् । यिनीहरुले पत्नीलाई धोका त दिँदैनन् तर यिनीहरुको सम्बन्धमा दुवैमा धेरै नै मनमुटाव हुने गर्छ ।कन्या राशि: कन्या राशिका महिला र पुरुष दुवै धेरैनै प्रतिभावान् हुन्छन् । तर विवाहपछि पुरुषको कुरा गर्ने हो भने कन्या राशिका पुरुषलाई राम्रो पति मानिँदैन । ज्योतिषका अनुसार कन्या राशिका आफ्नो पत्नीलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहने खालका हुन्छन् ।यस राशिका पुरुष प्राय आफ्नो पत्नीको आवाज दबाउन खोज्ने खालका मानिन्छन् ।यो पनि पढ्नुहोस्…
वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता सरल उपाय ! – बैवाहिक जीवन सफल होस् भन्ने चाहना हरकोहिमा हुन्छ । पति पत्निबीचको असमझदारीले दाम्पत्य जीवनमा नकरात्मक असर पनि पुर्याउन सक्छ । त्यसैले हामी तपाईंलाई यस्ता उपाय बताउँदैछौँ जसलाई अपनाउँदा तपाईं आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सुखमय बनाउन सक्नुहुन्छ ।
सफल वैवाहिक जीवनका लागि सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको एक–अर्कालाई बढीभन्दा बढी समय दिनु र धेरै समय साथमा बिताउनु हो ।पति–पत्नीबीच आपसमा एक अर्काको लागि सौहार्दपूर्ण भावना राख्नु, एक अर्काको भावनालाई सम्झिनु र आपसी समझदारीबाट समस्याको हल गर्नु सफल बैवाहिक जीवनको चिनारी हो ।कैयौं पटक कुनै एक विषयमा पति र पत्नीबीच फरक धारणा र सोच हुँदा पनि सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन एकअर्काको सोच, बिचार र सिद्धान्तको सम्मान गर्ने गर्नुपर्छ ।वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउन एक अर्काको काम र पेशालाई सम्मान गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सधैँभरी जिम्मेवारी मात्र निभाइरहँदा पनि वैवाहिक जीवन सफल हुँदैन । कहिलेकाँही दुवैजना मिलेर रमाइलो गर्ने, घुम्न जाने, सरप्राइज पार्टी दिने आदि गर्दा तपाईको पार्टनरलाई खुसी मिल्ने छ ।तपाईं आफ्नो जीवन साथीलाई कुनै तेस्रो व्यक्तिका अगाडि कहिले पनि अपमान नगर्नुहोस् । यस्तो गर्दा दुवैबीचको सम्बन्ध दाढिन सक्छ ।वैवाहिक जीवन सफल बनाउनको लागि तपाई एक अर्कालाई पति अथवा पत्नीको रुपमा मात्र नलिगेर एक असल साथीको रुपमा रहनुहोस् ।शारीरिक सम्बन्धले वैवाहिक सम्बन्धमा घनिष्ठता ल्याउँछ । तर यो जरुरी हुँदैन कि तपाईं हरेक समय शारीरिक सम्बन्धकै बारेमा सोच्ने गर्नुहोस् ।
डण्डीफोर आएर टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुहोस..